Halkaan Kaga Bogo Sababta Kareena Kapoor Khan Aan Wiligeeda U Saxiixan Doonin Filimaanta Koonfur Hindiya (+Video) - Hablaha Media Network
Halkaan Kaga Bogo Sababta Kareena Kapoor Khan Aan Wiligeeda U Saxiixan Doonin Filimaanta Koonfur Hindiya (+Video)
HMN:- Kareena Kapoor Khna waxay ka mid tahay xidigaha loogu jacel yahay Bollywood-ka xidigtaan ayaa mar walbo go’aan u gaar ah leh kareena ayaa sido kale diiday inay ku biirto Hollywood-ka si la mid ah xidigtaan waxay xaqiijisay inay sameyn doonin Filimaanta koonfur hindiya.
Xili waraysi laga qaaday Kareena ayaa la weydiiyay inay diyaar u tahay filimaanta koonfur hindiya, aad ayaa u Sharfaa Filimaanta koonfur hindiya waxay leeyihiin isku xir weyn waaana u riyaaqa shaqadooda.
Waxaa joogo jilaayaal waaweyn Sida Pawan, Rajinikanth sir iyo Mammootty sir waxayna sameeyaan filimaan cajiib Telugu iyo Malayalam aniga ma fahmaayo luqadooda sidaa daraadeed waxaa dareemaaya inaan xiriir la yeelan Doonin taasi ayaa dhibkeega ah”.
Xidigtaan ayaa waraysigeeda si wadatay waxayna sheegtay in filimaanta ugu wanaagsan taariikhdeyda ee koonfur hindiya in uu yahay filimaanta director-ka caanka ah ee Mani Ratnam waana helay fursad aan ula shaqeeyo midaas ayaana wax weyn ii ah. Kareena waxay filim sameeye Mani Ratnam la shaqeesay 2002 filimka Yuva.
Fadlan hoos ka daawo waraysiga laga qaaday Kareena kapoor Khan.